ဖူးနုသဈ: ယုနျမွငျလို့ ခြုံထှငျပမေယျ့
လက်စသတ်တော့ ကိုဥက္ကာဆိုတာ ကိုဇက်တီကို ပြောတာကိုး... မသိပါဘူးဗျာ... အဲဒီလောက်စွံမှန်း...
Pasir Ris is in the East side. (for correction).
Panggol (sorry for spelling) is quite close to west side.
Law Shay-> Yes, it was my mistake cos I was sleepy. :D Thanks for correction.
ZT ရေ စာတွေကဖတ်လို့ မရဘူး။ ဘာဖြစ်တာလဲ မရောင်စက်ကဖြစ်တာလား ဘယ်ကလဲသိဘူး။ ကွန်မန့်က ဘာပေးရမှန်းကိုမသိလို့ ဖတ်မရတဲ့ အကြောင်းပြောသွားတယ်။
ကိုဥက္ကာ…အဲလေ…ကိုဇက်တီ…။ ကိုဇက်တီကတော့ ကောင်မလေးတွေ မနောကို ကြေညက်နေအောင် သိတယ်ထင်ပါ့။ ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးတော့တောင် ရေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကာ..။း-)
ကိုဇက်တီ ရေ....ပြသနာက ...စာဖတ်လို့ ရရင် comment တွေ ဖတ်မရဘူးဗျ..comment တွေ ဖတ်လို့ ရရင်...စာဖတ်မရဘူး...ဘီလိုဖြစ်တာပါလိမ့်း)
အဲ...ဒါပေမယ့် comment window ကို ဖွင့်လိုက်တော့လဲ comment တွေက ဖတ်လို့ ရပြန်ရော..
နောက် ဒါပေမယ့်က ....google reader နဲ့ ဖတ်မရပြန်ဘူးး) ..
ကိုယ်ကတော့ အားလုံးဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလာပြောတာပါ။
သူများတွေ မရတာ ကိုယ့်ကျ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ရနေမှန်း စဉ်းစားလို့ကို မရဘူး။
ဒါကြောင့် စလုံးမှာ စိမ်းကားတတ်သူတွေ များလာတာ။
i can't read too.
သနားဘာတယ် အဲဒီလိုကြီးဒကယ်လုတ်တာဆိုရင်တော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပဲ ။ :P